War deg deg - Madaxweyne Geelle iyo Seedigiis Xeeyd oo Kooma ku jira. - iftineducation.com
War deg deg – Madaxweyne Geelle iyo Seedigiis Xeeyd oo Kooma ku jira.
iftineducation.com – Qaar ka mida qoysaska Madaxweyne Geelle iyo Gudoomiye Xeeyd ayaa ku qulqulaya aqalka Madaxtooyada Jibouti kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu geeriyooday Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Jibouti Jamac Mohamud Xeeyd oo waxyar kadib markii uu Kooma galay dibada loola cararay.
Jamac Mohamud Xeeyd oo ah Seediga Madaxweyne Geelle ayaa kooma galay kadib markii Dhiig madaxa uga furtay sida ay daabacday Jariirada Indian News Letter hasse yeeshee waxay warar goor dhaweyd soo dhacay sheegayaan inuu ku geeriyooday Isbitaal ku yaal Magaalada Munich ee dalka Jarmalka.
Website-ka Hadhwanaagnews ayaa lagu daabacay Warbixin akhristayaasha looga codsaday inay u duceeyaan Jamac Mohamud Xeeyd taas oo luqad ahaan loo qoray qaab la mida Warbixintii ay akhristayooshada ku weydiisteen inay u duceeyaan allaha u naxariistee Abwaan Gaariye oo xanuunkii hayay u dhintay .
Qof ka tirsan Qoyska Jamac Xeeyd ayaa ku xog waramay inaan la cadeeyn Karin geeri iyo nolol xaalada uu ku sugan yahay .
Inkastoo Jamac Xeeyd xaaladiisa laga deeyriyay hadana waxaa dhinaca kale Isbitaalka la dhigay Madaxweynaha Jibouti Ismaciil Cumar Geelle oo kelyaha istaageen sida laga soo xigtay Marwadiisa Khadra Xeeyd.
Beelaha Ciisaha iyo Canfarta ayaa badankood ku farxay xanuunada maalmo is xiga ku dhacay Madaxweyne Geelle iyo Seedigiis Xeeyd oo ay rumeeysan yihiin inay hantidii Qaranka Jibouti ku tagrifaleen.
Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Jibouti Jamac Mohamud Xeeyd wuxuu Gurya ka iibsaday Dalka Canada isagoo dhinaca kale dhaqaalaha Jibouti ku maalgelin jiray Ururada siyaasadda Somaliland.
Jamac oo la dhashay Marwo Khadra Xeeyd,Xaaska Madaxweyne Geellewuxuu ka dhigan yahay ninka labaad ee ugu sareeya awooda Jamhuuriyada Jibouti ,wuxuuna hayaa sirta dhaqaalaha dalkaas oo dhan.
Xanuunada ku dhacay labada Masuul ayaa ku beegan xilli Gudoomiyaha Mucaaradka Jibouti Mr Dahir Daf uu Djibouti tegi doono 13 Janaury 2012 sida uu ku sheegay Wareysi uu siiyay Website-ka Cadceed.com.
Xeeldheerayaasha la socda siyaasadda Jibouti waxay leeyihiin xanuunada labada Masuul waxaa larumeeysan yahay inay ka dhasheen Cadaadis beesha Caalamka saartay Madaxweyne Geelle taas oo lagu qasbay inuu Hogaamiyaha Mucaaradka MRD si xora ugu tamashleeyo dalkiisa Jibouti.
Boqortooyada Sucuudiga iyo Dimuquraadiyada (Daawo Film Laga Sameyay Oo Dhamestiran)
Waa sidee xaaladda dhabta ah ee hantidi Soomaaliya ku lahayd dalka Talyaaniga (Video)